အမေရိက | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 182
ကာတွန်းစောငို – နားဝေးတဲ့ နိုင်ငံတော်
ကာတွန်းစောငို – နားဝေးတဲ့ နိုင်ငံတော် ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
တ ချို့ က စ ပျ စ် သီးဖြ စ် တ ယ် ၊ တ ချို့ က စ န်းစ န်းတ င့် ဖြ စ် တ ယ် အောင်ဝေး၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၃ တချို့ က စပျစ်သီးဖြစ်တယ် တချို့ က စန်းစန်းတင့်ဖြစ်တယ်။ ခေတ်ကြီးကိုက ကိုလိုမနီ၊ ခရိုနီခေတ်။ တချို့ က လက်ဝေခံဒီမိုကရေစီ တချို့ က လက်ကျန်ဒီမိုကရေစီ။ ရန်ကုန်က ရထားမဖြစ်ဘူး...
ကာတွန်းစောငို – သန်းရှာသူများ ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်း စောငို- ခရိုနီတွေ ယူဂျီလုပ်ကုန်ဘီ ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
အိမ် အောင်ဒင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၁ လူငါးယောက် နဲ့ ကြောင် ၃ကောင်၊ ခွေး တစ်ကောင် နေလောက်ရုံ အမိုး၊ အကာ နဲ့ ကြမ်းခင်းတော့ရှိရဲ့ တံခါးတွေက မလုံခြုံ လေတိုက်ရင် ယိမ်းရိုင်လို့ မိုးသဲရင် နှင်းရိုက်ရင်ဖြင့် ချမ်းလို့တုန် ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ငါတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပုံ….။ လောကဓံ လှိုင်းလုံးတွေကလဲ အမုန်းကြီးကြီးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခတ် ဒီအိမ်အိုလေးထဲမှာ တို့မိသားစု ပြိုကွဲကြ၊ ရန်ဖြစ်ကြ၊ စိတ်ကောက်ကြ၊ ပြန်ချစ်ကြ ဘဝရဲ့ သင်္ခန်းစာတွေ အထပ်ထပ်ရခဲ့ကြပုံ….။ ဘယ်သူပြောလဲ အိမ်ဆိုတာ အမိုးအကာရှိဖို့လိုတယ် အခန်းတွေ ဖွဲ့စည်းထားရမယ် ပြူတင်းပေါက်တွေရှိရမယ် လူ့ဘဝ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ တပ်ဆင်ထားရမယ် အလင်းရောင်နဲ့ အပူအအေးမျှတရမယ်…. လို့ ဘယ်လိုပဲ ပြည့်စုံနေပလေ့စေ...
ကာတွန်းစောငို – ခရိုနီဆို ချိုနဲ့လား …
ကာတွန်းစောငို – ခရိုနီဆို ချိုနဲ့လား … ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
ကာတွန်း စောငို – အဖေနဲ့ သူ၏သားများ
ကာတွန်း စောငို – အဖေနဲ့ သူ၏သားများ ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၁၈) ၂၀၁၂ နဲ့ မိုးမခ၊ ပြီးတော့ … ဦးနုပါလီမန်မှသည် ဒေါ်စုပါလီမန် ဆီသို့ မောင်ရစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၃ ၂၀၁၃ နှစ်သစ်ကူးမှာ ၂၀၁၂ နှစ်ကို နှုတ်ဆက်လှည့်ကြည့်တဲ့စာ မရေးရသေးဘူး။ မိုးမခရဲ့ လက်တဆုပ်စာမရှိတဲ့ အယ်ဒီတာတွေကလည်း နှစ်ကူးကို အဖက်လုပ်ပြီး မရေးကြဘူး။ သည်တော့ ကာတွန်းရေးတာတွေ ဘေးချပြီး စာလေးဘာလေး ရေးရတော့မှာပေါ့။ မိုးမခနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ၂၀၁၂ မှာ စာမူပေါင်း ၂၉၂၈ ပုဒ် တင်ခဲ့တယ်။ တလကို ဆောင်းပါး ၂၄၀ ကျော်ပေါ့။ စာမူခ လက်ခ လဘက်ရည်ဖိုး ဘာမှ မပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၂ မှာ ပင်တိုင်စာမူရှင် ၈...
ကာတွန်း စောငို – ကချင်မြေက ကြိုဆိုနေပါတယ် …
ကာတွန်း စောငို – ကချင်မြေက ကြိုဆိုနေပါတယ် … ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၃ Tags: ကချင်
Page 182 of 195«1...180181182183184...195»
သစ်ကောင်းအိမ် - ပဉ္စမထပ်က နှင်းမြူ ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၅) - Aung DIn